Vokatra sy serivisy | P&O MG LATAM | Advanced Prosthetics
Hyperrealistic sy Advanced Devices
Prosthesis amin'ny hoditry ny olombelona
Prosthesis amin'ny rantsantanana
Prosthesis ho an'ny Brachymetatarsia
Prosthesis amin'ny tongotra
Nono na prosthesis nono
Saron'ny orthopedique ho an'ny rantsantanana, mpiaro ary fanitsiana
tanany orthopedic ho an`ny rantsan-tongotra
100% modely mahazatra, padding ary kojakoja ho an'ny tongotra
MAMMARY 3D, Pedagogique et Training
Orthopedics sy traumatology
Ohatra amin'ny fandresena
Fanamarihana sy Vaovao
amputation malformation sy deformation
Prosthetics sy orthotics ho an'ny olombelona
Prosthetics sy orthotics ho an'ny biby
hoditra olombelona sentetika
Fahasalamana * Lozisialy sy fitaovana
Teknolojia vao misondrotra ho an'ny fahasalamana
Advanced Prosthetics & Orthotics MG LATAM » Vokatra sy serivisy
Pejy: Vokatra sy serivisy
Advanced, Hyperrealistic Prosthetics MG LATAM * Zavakanto tsy mampino
Ny Advanced Ortho Devices ho an'ny rantsan-tanana * MG LATAM, dia samy novokarina araka ny fandalinana tsirairay ny…
Prosthetics Advanced ho an'ny tongotra
Ny fitaovana Orthopedic Advanced ho an'ny tongotry ny MG LATAM, dia samy novokarina araka ny fandalinana tsirairay nataon'ny marary sy…
Prosthetics Advanced ho an'ny tanana
Ny fitaovana avo lenta ho an'ny tanana, avy amin'ny MG LATAM, dia samy novokarina araka ny fandalinana tsirairay nataon'ny marary sy…
Hijery misimisy kokoa...
Prosthetics sy Orthoses Advanced * External sy Hyperrealistic
Ny fanamaivanana ara-batana sy ara-pihetseham-po mendrika ny marary
Fahafahana lehibe kokoa
Fijery tsara indrindra
P&O MG Prosthetic Devices dia:
Kanto tsy mampino, tena manokana, raha ny marina.
Ny endriny, ny kalitao ary ny faharetana, tsara indrindra.
Ny ankamaroany dia amboarina miaraka amin'ny fampidirana ny MG Hyperrealistic Synthetic Skin (formula manokana) sy singa manokana hafa. Ankoatra izany, manokana (teknolojia, orthopedique, anatomical, mekanika ary kosmetika.).
Removable, aesthetic ary hyper-realistic, tena voajanahary. Miaraka amin'ny morphologie, ny loko, ny tonony, ny haingon-trano, ny folaka ary ny antsipiriany hafa izay maka tahaka ny an'ny marary amin'ny fomba tena izy.
Fifandraisana - Faritra mpanjifa
Vahaolana miavaka sy vaovao ho an'ny olona mila manatsara ny fahasalamany sy ny bika aman'endriny, indrindra ho an'ireo izay voan'ny trauma na aretina miteraka; Mijaly ny fahaverezan'ny rantsan-tongotra na tanana (phalanx distal, afovoany ary proximal), tapa-tongotra amin'ny ampahany na manontolo amin'ny tanana, tongotra, tongotra, sandry, orona, ampahany amin'ny tarehy na sofina, nono, vodiny ary rantsantanana hafa ary faritra ivelany isan-karazany ny vatana. Natao manokana, miaraka amin'ny ergonomic sy manokana. Izy ireo dia natao mba handrefesana ny tsirairay ary mifanaraka amin'ny anatomie, morphologie, physiognomy ary lokon'ny hoditra.
Ny teknolojia manokana, MG LATAM, dia mahavita manonitra ny tsy fahampian'ny orthopedique.
Mamerina ny tena anatomy sy kosmetika ny marary. Maka tahaka tanteraka ny tena endriky ny tsirairay. Famerenana indray ny ampahany amin'ny vatana efa nopotehina, miaraka amin'ny fikorontanana na fikorontanan'ny fototarazo.
Ny prostheses MG mandroso sy hyper-realistic dia hanana ny fampahalalana fototra momba ilay olona; morphologie, dian-tanana, habe, loko hoho, mola sy lalan-dra, sns.
Ny zavatra rehetra dia azo atao, amin'ny ampahany amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa mandritra ny dingana famokarana. Mba handraisana ny haavon'ny fatiantoka, indrindra ho an'ny tapa-kazo amin'ny ampahany, miaraka amin'ny fisian'ny phalanx na fotony sisa. Ho an'ny tranga sarotra kokoa na tapaka dia tokony hanontany amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny MG ianao momba ny safidy hafa azonao.
Amin'ny toe-javatra rehetra, azo antoka fa ny prostheses MG efa mandroso sy hyper-realistic dia miraikitra tsara amin'ny fotony na rantsambatana sisa. TSY MILARTSAKA NA MAHALEFA amin'ny fampiasana isan'andro.
Misaotra ny SOQ-MG * MG Orthopedic Sock (patente miandry). Afaka apetraka na esorina ao anatin'ny segondra izy ireo, mifanaraka tsara. Ny prostheses MG avo lenta sy hyper-realistic dia tsy mila akora simika na fitaovana manokana, lakaoly na bandy ho an'ny fametrahana isan'andro. Na teknika manokana na fitaovana fanampiny hanesorana azy ireo.
Ny filôzôfian'ny famoronana MG LATAM sy ny ekipan'ny famolavolana manokana dia mifototra amin'ny fahatsapan'ny fahatakarana fa miavaka ny ratra tsirairay, toy ny fitaovana tsirairay ( mandroso sy tsy mandroso) izay ataon'izy ireo.
Ny mpampiasa dia mahazo ampahany manokana, tena manokana izay mifanaraka amin'ny anatomika voajanahary, izay mifanaraka tsara amin'ny ampahany amin'ny vatana voakasika, araka ny fepetra takian'ny olona.
Ny teknolojia matrix dia niandoha tamin'ny fandalinana maharitra sy lalina momba ny rafitra orthopedique olombelona, ​​​​amin'ny alàlan'ny siansa toy ny:
Morphologie (fifehezana siantifika, voaforon'ny Anatomy descriptive, topografika na faritra ary miasa)
Biomechanics (fandalinana ny mekanika ampiharina amin'ny vatan'olombelona)
Kinesiology (fifehezana ara-pitsaboana izay mandinika ny fihetsiky ny vatana)
Ergonomika (fampifanarahana ny zavatra sy ny tontolo iainana amin'ny anatomie sy physiologie ny olombelona)
Izy io dia vita miaraka amin'ny taranja sy fahaiza-manao hafa, izay mampifanaraka tsara ny siansa, ny fitsaboana, ny anatomie, ny simia, ny mekanika, ny biomechanika, ny elektronika, ny teknolojia 3D, ny asa tanana, ny zavakanto, sns.
Ny dingana manontolo dia mitarika amin'ny famoronana teknolojia sy teknika famokarana tena zava-baovao.
Ireo manam-pahaizana MG LATAM izay mamorona fitaovana orthopedique, mianatra ary miasa maharitra mandrakotra ny antsipiriany rehetra takian'ny marary, dia mikaroka hatrany ny fomba fiasa, ny fikarohana izay manome fanamaivanana tena izy ka ny marary miaraka amin'ny fianakaviany dia sitrana na manatsara ny kalitao. ny fiainana.
Serivisy parallèle * P&O MG LATAM
Serivisy fakan-kevitra, fandalinana, diagnostika ary fanombanana
Ho fanampin'ny toro-hevitra amin'ny tanana voalohany, ny marary, ny mpanjifa ary ny mpampiasa * MG LATAM, dia mahazo ny saina sy ny hevitra mivantana momba ny manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana (mpamorona sy manam-pahaizana manerantany).
Inona no serivisy fakan-kevitra manokana sy manokana?
Io no dingana voalohany tokony hatao amin'ny dingana rehetra mifandraika amin'ny fikarakarana marary na mpampiasa izay manana filana manokana sy manokana.
Amin'ny alàlan'ny fifampidinihana momba ny fandalinana, ny fitiliana ary ny fanombanana (mivantana na an-tanety), ireo manam-pahaizana manokana sy mpiasa mahafeno fepetra ao amin'ny P&O MG LATAM dia mamaritra ny fomba tokony harahina, ny fitsaboana ary ny vokatra mifanaraka amin'izany, araka ny filan'ny tsirairay sy ny toe-javatra misy ny raharaha.
Ny marary dia hahazo: valiny marina, haingana ary mazava izay hanala ny ahiahiny. Miaraka amin'ny toro-hevitra matihanina amin'ny tanana voalohany, ary koa torohevitra sarobidy sy azo ampiharina, hanampy anao hahatakatra sy hitantana ny toe-javatra misy anao. Inona no hanamora ny dingana fanarenana, miaraka amin'ny prosthetics ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra sy ny vidiny.
Ny prostheses amputation Pirogoff dia noforonina sy novolavolaina tamin'ny teknolojia manokana sy avo lenta izay mampifandray ireo singa ara-javakanto sy ara-javakanto miaraka amin'ny singa hafa, izay ahafahana manolo ny kosmetika sy anatomika, amin'ny toe-javatra maro dia mihatsara ihany koa ny fiasan'ny rafitra manontolo. ampahany tsy hita.
Ny amputation an'i Pirogoff dia variana amin'ny amputation an'i Syme.
Ao anatin'izany dia voatahiry ny tuberosity ao ambadiky ny calcaneus, izay mivadika sy miraikitra amin'ny kitrokely amin'ny alàlan'ny fanamafisana anatiny. Amin'izany fomba izany, ny halavan'ny rantsambatana dia voatazona ary, miaraka amin'izay, ny olana amin'ny tsindry malleolar dia mihena amin'ny fanohanana ny amputation Syme. Ny mifanohitra amin'izany dia ny fitomboan'ny fahasarotana ara-teknika ary ankoatr'izay, ilaina ny fandrakofana hoditra lehibe kokoa. Tsy tsara kokoa noho ny amputation infracondylar ny fitting sy biomechanika amin'ity amputation ity.
Mba hahatakarana ny tongotra
Tsy maintsy takatsika aloha ny asany fototra izay ahitana ny: Ny maha-fanohanana tena ilaina ahafahana mihetsika amin'ny lafiny roa (roa tongotra).
Ny tongotra dia manatanteraka asa fototra sasany:
Misoroka ny lanjan'ny vatana manontolo, manome azy ny fifandanjana.
Misoroka ny fiatraikany tsy tapaka, manamaivana ny angovo vokarin'ny hery ateraky ny fandehanana.
Ampifanaraho amin'ny karazana surface isan-karazany, anisan'izany ny tsy ara-dalàna indrindra.
Miasa toy ny lever henjana izay mamorona hery manetsika ilaina handehanana.
Afindrao ny hery mihodina novokarin'ny andilany.
Mazava ho azy fa mifandraika amin'ny diabe izany.
Misy sensor manokana ao amin'ny hozatrao, ny hozatrao ary ny tonon-taolana izay mora mihetsika na tsindry. Ireo dia manampy ny atidoha hahafantatra ny toerana misy ny tongotrao raha oharina amin'ny ety ivelany.
Ny fandrindrana ny atidoha ara-batana ny tongotra
Ny rafitra rehetra mandrafitra ny tongotra, ny hozatra ary ny tendon dia miara-miasa amin'ny taolana, ligaments, tonon-taolana, izay mifanaraka amin'ny atidoha, mba hahafahan'ny tongotra manatanteraka ireo asa ireo. Raha tsy mandeha tsara ny iray amin'ireo singa ireo, dia hisy fiantraikany amin'ny hafa rehetra.
Prostheses silicone aesthetic ho an'ny rantsambatana ambany, vita amin'ny fanavaozana sy fanavakavahana. Fitaovana ho an'ny rantsambatana ambany. Teknolojia izay mitambatra orthopedic, singa ara-javakanto miaraka amin'ny singa hafa, izay azo hanoloana kosmetika sy anatomika, amin'ny toe-javatra maro dia mihatsara ihany koa ny fiasa. Fanampiana manokana ho an'ny marary amputation, deformation, malformation ampahany na tanteraka amin'ny tongotra iray na roa. Ny ratra izay mety ho vokatry ny antony mampalahelo, hatrany am-bohoka na vokatry ny aretina toy ny diabeta na homamiadana.
Ny MG LATAM Advanced Orthopedic Devices ho an'ny tongotra dia novokarina araka ny fandalinana tsirairay momba ny marary sy ny ratra nahazo azy.
Miaraka amin'ny fanamboarana zavakanto ara-javakanto, ataon'ny manam-pahaizana manokana, izay manolotra vokatra miaraka amin'ny fepetra tonga lafatra ho an'ny tsirairay. Mitantana ny maka tahaka amin'ny antsipiriany ny toetra mampiavaka ny marary. Ankoatra ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny fitadiavana fanarenana haingana, voajanahary ary tsara.
Ny Prostheses Advanced Ortho an'ny MG LATAM ho an'ny tongotra dia mihoatra ny prostheses rehetra vita amin'ny teknika indostrialy, nentim-paharazana na mahazatra, izay vokatra mahazatra indrindra, misolo tena ny 90% amin'ny tsena manerantany.
Noho ny fampidirana ireo singa orthopedic sy ergonomic natao handrefesana ihany koa, mitombo na miverina ny fahafaha-manao sy ny fivezivezena, misoroka na misoroka ny fitafy, ny fahasimbana ary ny vokany, ary misoroka ny fanaintainana sy ny antony mahatonga izany. Ny ho an'ny marary dia fandraisana anjara lehibe amin'ny fanarenana azy amin'ny fanatsarana ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina.
Ny mpampiasa koa dia mahita fitaovana amin'ny endrika prostheses amin'ny tongotra, noforonina mba hanakanana ny may, ny fikorontanana na ny tsy fahampiana.
Fitaovana manokana izay amin'ny toe-javatra maro dia afaka misoroka fanaintainana sy/na manitsy ireo karazana tohiny.
Ny prostheses sandry MG LATAM dia manatsara ny endriky ny vatana amin'ny marary voan'ny amputation. Manana asa fototra koa izy ireo; pincers na fikapohana amin'ny tanana, hetsika tsotra sy mipetrapetraka izay atao amin'ny fomba mekanika (tsy misy singa myoelectric). Raha mitaky izany ny marary, dia azo ampidirina ao anatin'ny famolavolana ny teknolojia hafa toy ny electromechanics na myoelectrics.
Ny ekipa mpamorona dia maniry ny prostheses amin'ny sandry efa mandroso mba hahitana marimaritra iraisana izay mahafa-po ho an'ny ankamaroan'ny tapa-tongotra ambony. Prostheses izay manome voajanahary indrindra ho an'ny mpampiasa, manome azy ny bika aman'endriny tsara indrindra, miaraka amin'ny soatoavina ara-esthétique tsy manam-paharoa.
Ny fitadidiana ny famoronana sy ny fampidirana ireo singa tena izy, ny lanjany ambany, ny fahaleovan-tena sy ny fanalavan'ny hoditra, ny fanoherana avo amin'ny zavatra simika sy ny tontolo iainana rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny vokatra.
Indrindra fa miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena fa ny prostheses amin'ny rantsambatana ambony dia iharan'ny fitsapana lehibe sy henjana izay entin'ny fiainana andavanandron'ny marary tsirairay ary tsy maintsy miatrika saika fanamby rehetra.
Famoronana, famolavolana ary famokarana fitaovana vaovao sy manokana ho an'ny tongotra tapaka. Ny teknolojia izay mampifangaro orthopedic, singa ara-javakanto amin'ny singa hafa, izay ahafahana manolo ny kosmetika sy anatomika, amin'ny toe-javatra maro dia mihatsara ihany koa ny fiasan'ny tongotra manontolo na miankina amin'ny ampahany tsy hita. Fanampiana manokana ho an'ny marary amputation, deformation, malformation ampahany na tanteraka amin'ny tongotra iray na roa. Ny ratra izay mety ho vokatry ny antony mampalahelo, hatrany am-bohoka na vokatry ny aretina toy ny diabeta na homamiadana.
Ny MG LATAM Advanced Orthopedic Devices ho an'ny tongotra dia samy novokarina araka ny fandalinana tsirairay momba ny marary sy ny ratrany.
Ny Prostheses Ortho Foot Advanced an'ny MG LATAM dia mihoatra ny prostheses rehetra vita amin'ny teknika indostrialy, nentim-paharazana na mahazatra, izay vokatra mahazatra indrindra, misolo tena ny 90% amin'ny tsena manerantany.
Ny mpampiasa koa dia mahita vahaolana amin'ny endrika Foot Prostheses, noforonina mba hanakanana ny may, ny fikorontanana na ny tsy fahampiana. Fitaovana manokana izay amin'ny toe-javatra maro dia afaka misoroka fanaintainana sy/na manitsy ireo karazana tohiny.
Functional foot orthosis dia fitaovana orthopedique izay mampiroborobo ny fahamendrehan'ny tongotra sy ny tonon-taolana ambany, manohitra ny hery fanehoan-kevitra amin'ny tany izay mahatonga ny hetsika tsy ara-dalàna amin'ny taolana mandritra ny dingana fanohanana ny fandehanana. Izy ireo koa dia manitsy sy misoroka ny fikorontanana isan-karazany, ny tsy fetezana ary ny tohiny vokatry ny ratra sy ny aretina amin'ny tongotra. Ny fampiasana orthoses azo ampiasaina hanitsiana ny fihetsika ratsy amin'ny tongotra dia nampiseho fanatsarana tamin'ny marary maro tamin'ny fanitsiana ny fihodinana anatiny-ivelany tafahoatra sy ny fikorontanan'ny tongotra varus na valgus.
Ny vokatra mahasoa mba hanoherana ny olana sasany amin'ny rantsambatana ambany, indrindra ny tongotra. Izay ateraky sy/na avy amin'ny karazana kilema isan-karazany, tapany na tanteraka toy ny Chopart, Lisfranc, Syme amputation, sns.
Izy ireo koa dia mirakitra vahaolana ho an'ny ratra madinidinika vokatry ny aretina, ny fanatanjahan-tena na ny fandidiana, toy ny; tongotra diabeta, scuffs, ranomaso, rantsan-tongony tapaka, andohalambo avo, tongotra fisaka, fanalahidy, spurs, sns.
Ny vokatra super-custom dia ahafahan'ny marary manao saika karazana kiraro rehetra, mitsitsy ny marary na ny marary naratra amin'ny fahasahiranana amin'ny fahazoana kiraro manokana, ary na dia ny fampiasana kiraro manokana na orthopedic aza.
Ny tanany orthopedic izay miaro, manitsy, misoroka ary manamaivana ny karazana ratra isan-karazany. Ao amin'ny fototarazo vao nodidiana indrindra indrindra, dia manatsara ny fanasitranana izy ireo, manitsy ary misoroka ny deformation sy ny mamaivay be loatra amin'ny rantsantanana na ny fotony izay eo am-panasitranana na ho avy.
Fanavaozana sy fanavakavahana
Famoronana, famolavolana ary famokarana fitaovana manara-penitra ho an'ny rantsan-tànan'olombelona. Teknolojia mampiaraka orthopedic, singa ara-javakanto amin'ny singa hafa.
Fanampiana manokana ho an'ireo marary tapa-kazo, kilemaina, fahadisoam-panantenana amin'ny ampahany na tanteraka na karazana ratra hafa izay mety ho vokatry ny trauma, vokatry ny aretina na hatrany am-bohoka.
Mpiaro sy mpandrindra
Ny fitaovana natao hiarovana na hanitsy, amin'ny ankamaroan'ny tranga (miankina amin'ny toetran'ny ratra) dia manatanteraka ny asany roa.
Tena ilaina ho an'ny rantsantanana izay nandalo fandidiana na fandidiana. Saingy, tena manampy tokoa ho an'izay tratry ny amputation izy ireo.
Ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy sy ara-potoana dia misoroka ny tohiny ary misoroka mihitsy aza ny fanapahana na fandidiana amin'ny ho avy izay mety hitranga noho ny halehiben'ny aretina, toy ny amin'ny trangan'ny diabeta (amputation miverimberina), noho ny lozam-pifamoivoizana taorian'ny fandidiana, noho ny fahasitranan'ny aretina. fotony, sns.
Amin'ny toe-javatra maro, ny tsy fampiasana azy io mandritra ny fotoana mety dia mety hahatonga ny fotony ho lasa kilema ary mahatonga ny dingan'ny mety tsara ho lava kokoa, sarotra kokoa ary noho izany dia lafo kokoa ho an'ny marary.
Arovy amin'ny karazana ratra maro
Ny tanan'ny rantsantanana dia natao hiarovana na hanitsiana ny aretina isan-karazany, olana ary toe-javatra mifandray amin'ny rantsantanana:
Arovy amin'ny calluses
Finger Protectors Cracked
Miaro amin'ny may
Arovy ny triatra amin'ny dermatitis mifandray
Fanampiana amin'ny ratra keratotika
Manamaivana sy misoroka ny fifandirana
Manamaivana ny tsindry tafahoatra amin'ny rantsantanana
Fiarovana amin'ny rantsantanana
Izy ireo dia miaro amin'ny hypersensitivity ny rantsantanana nerve
Manolora fiarovana amin'ny rantsan-tongotry ny hoho na ny tantanana
Fanaintainana sy fiarovana ankapobeny
Manamaivana ny fanaintainana sy ny fivontosana izy ireo raha sendra tapaka na may eo amin’ny rantsan-tananao
Manamaivana ny fanaintainan'ny arthritis vokatry ny fihenjanana sy ny tsindry
Manala ny adin-tsaina ara-panatanjahantena amin'ny ratra
Fisorohana ny fanerena sy ny fifandirana amin'ny fandidiana vao haingana
Manamaivana sy manome fiadanan-tsaina
Misoroka ny fijaliana noho ny fanaintainana, satria miaro ny tendron'ny nerve amin'ny rantsantanana na ny fotony amin'ny fanaintainana noho ny ratra manaraka, noho ny fifandonana na fifandonana ary kapoka amin'ny faritra henjana.
Famoronana, famolavolana ary famokarana fitaovana taranaka farany ho an'ny rantsan-tongotry ny olombelona. Teknolojia mampiaraka orthopedic, singa ara-javakanto amin'ny singa hafa.
Ny rantsan-tongony dia natao hiarovana na hanitsiana ny aretina isan-karazany, olana ary toe-javatra mifandray amin'ny rantsan-tongotra:
Misoroka ny fahatafintohinana, noho ny fisondrotry ny tsindry sy ny fikomiana amin'ny fandidiana vao haingana
Avahana ary ahitsio clinodactyly, fikorontanan'ny rantsantanana miolikolika na mitongilana
Tutorials, toro-hevitra ary torolalana avy amin'ny matihanina manam-pahaizana.
Fanamarihana, vaovao, hetsika, teknolojia. Fampahalalana an-tanana voalohany, tena manokana ary manokana.
Tickets araka ny sokajy
Tickets araka ny sokajy Safidio ny sokajyAltruism (8)Ny aretina sy ny aretina (20) Kansera (5) diabeta (4) Mpitsabo mahay (1)Jeneraly (11)GLOSSARY NY ENCYCLOPEDIA (14)Lalàna momba ny fahasalamana (4)Tontolo ara-tsaina (36) Fanarenana ara-pihetseham-po (33)Fanamarihana sy Vaovao (14)Orthopedics sy traumatology (58) Ny fahadisoam-panantenana sy ny fikorontanana (53)PRODUCT (7)Prostheses sy orthoses ho an'ny biby (4)Prosthetics sy orthotics ho an'ny olombelona (27) Anaplastology (6) Hoditra sintetika (5)Fanarenana ny olona tapaka (19) Ohatra amin'ny fandresena (12)Fahasalamana * Lozisialy sy fitaovana (14) Teknolojia mipoitra ho an'ny fahasalamana (10)
Famaritana ny psikolojia
Ny psikolojia dia ny fitsipi-pifehezana izay manadihady ny fizotran'ny sain'ny olona sy ny biby. Ny…
Ny robot 'Mesmer' toa an'i Westworld dia velona ao amin'ny orinasa UK
Ny robot 'Mesmer' toa an'i Westworld dia velona ao amin'ny orinasa UK. Tian'ny rehetra ny andiany The Metal Souls…
Fandinihan-tena manan-danja ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy
Ny antony mahatonga ny loza amin'ny vehivavy sy ny lehilahy Ny nono dia taova glandular mampiavaka ny biby mampinono. Amin'ny karazana...
© Zo rehetra voatokana * Inversiones MG LATAM